स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी युवती किन लागिन् एकाएक जागिर छोडेर यौन धन्दामा? को–को छन यौन ग्राहक ? को–को छन यौन ग्राहक? – PathivaraOnline
Home > समाज > स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी युवती किन लागिन् एकाएक जागिर छोडेर यौन धन्दामा? को–को छन यौन ग्राहक ? को–को छन यौन ग्राहक?
admin October 29, 2018 समाज 0
एजेन्सी । २४ वर्षीया उपमा (नाम परिर्वतन)को कथा केही फरक छ । स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी उपमाले आमाको पाठेघरमा पलाएको ट्युमरको उपचार गराउन एउटा फाइनान्समा रिसेप्सनको जागिर सुरु गरेकी थिइन् । जागिर थालेको एक हप्ता पनि नबित्दै उनी फाइनान्समा नियमित आउने एक ग्राहकसँग नजिकिइन् । ती ग्राहकले उनलाई एकपटकका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरे । त्यत्रो पैसा पाइने भएपछि उपमा लोभिइन् ।
ती ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क हुन थालेपछि अन्य त्यस्तै ग्राहकसँग पनि उनको सम्पर्क हुन थाल्यो । मासिक ११ हजार रुपैयाँको रिसेप्सनको जागिरमा लागेकी उपमाले यौन व्यवसायबाट एक दिनमै १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउन थालेपछि उनको मन यतै भुलियो भने एक महिनामै आमाको उपचार खर्च पनि जुट्यो । आमाको उपचारपछि उनी फाइनान्सको जागिर छाडेर यही व्यवसायमा केन्द्रित भएकी छिन् ।
तनहुमा घ’ट्यो यस्तो ड’रलाग्दो घ’टना: छोराको श’व घरमा, आमाछोरीको नदी किनारमा
छोराले ल्याइदिएको मोबाइलबाट लभ गरेर आमा पोइल हिँडेपछि… (भिडियो पनि हेर्नुस्)